निन्द्रा नपुगेपछिको पहिलो असर नै दिमाखमा पर्न सुरु हुन्छ - महत्वपूर्ण जानकारी - Sakaratmak Soch
मन छुने भनाईहरु
निन्द्रा नपुगेपछिको पहिलो असर नै दिमाखमा पर्न सुरु हुन्छ – महत्वपूर्ण जानकारी
स्मार्ट फोन बोक्दैमा मान्छे पनि स्मार्ट देखिने भ्रमले हामीहरु यसको उचित प्रयोग गर्न नजान्दा जीवनमा धेरै समस्याहरु आइपरेका हुन्छ । हामीले साना साना कुराका लागि, मनोरञ्जनका लागि, समय कटाउनको लागि, मोबाइलको बढी प्रयोग गर्न थालेका छौं । हुदा हुदा हामी बाटोमा हिड्ने बेलामा कि त फोनमा कुरा गरिरहेका हुन्छौं कि गीत सुन्दै नत्र च्याट गरिरहेका हुने गर्छौं ।
यसरी बाटोमा हिड्दा निउरेर धेरै मोबाइल चलाउने बानीले बाटोमा हिँड्दा छेउ छाउको मान्छे तथा वातावरणमा वास्ता हुदैन । यसबाट बाटोमा हिडिरहेको मान्छे वा गाडी नदेखेर एकअर्कासँग ठोकिने खतरा, एक्सिडेन्ट हुने खतरा मात्र नभएर हाम्रो घाँटी, गर्दन तथा ढाडमा हानिकारक मात्रामा तौलको सृजना गरेर नकारत्मक असर पुर्याउने देखाएको छ । बैज्ञानिकहरुका अनुसार हामीले निहुरेर मोबाइल चलाउँदा हाम्रो गर्दनमा २७ केजी बराबरको तौल लिएर बस्नु बरावर हुने गर्छ ।
हाम्रो टाउकोको तौल ५ केजी जति भए पनि मोबाइल चलाउँदा निउरिने भएकोले उक्त २२ केजी थप भार थपेर २७ केजी बन्ने हुन्छ । अहिले स्मार्टफोनको कारण मानिसहरुले लामो समयसम्म मोबाइलमा झुण्डिने गर्दा उनीहरुको घाँटी र ढाडमा समस्या देखिन थालेको छन् । एकछिन फुर्सदको समय पाउदा जहाँ भएपनि मानिसहरु आफ्नो मोबाइल निकालेर सुरु हुन थाल्ने गर्छन् ।
हाम्रो घाटी तथा ढाडमा धेरै भार पर्नाले मासुहरु च्यातिने, हड्डी खिइने समस्याहरु देखा पर्न थाल्छन् । मोबाइलको धेरै प्रयोगले कमजोरी, आँखा पोल्ने, आँखा दुख्ने, टाउको दुखाई, थायराइडको समस्या, केश झर्ने, निद्रा नलाग्ने, मुटु रोग, मृगौलाको समस्या, उच्च रक्तचाप, तनाब, डिप्रेशन, मोटोपन, मस्तिष्कको ट्युमर, मस्तिष्कको क्यान्सर आदी जस्ता गम्भीर रोग लाग्न सक्दछ ।
विभिन्न अनुसन्धानका अनुसार मोबाइल फोनमा दुई मिनेट मात्र गरेको कुराकानीले पनि हाम्रो मस्तिष्कको रक्त प्रणालीमा अवरोध पुर्याउने देखाइएको छ । हामीले लामो समयसम्म निहुरेर मोबाइल नचलाएर समय समयमा आफ्नो कुमले कान छुने गर्दन र टाउकालाई सहज हुने व्यायाम गर्नु पर्छ ।
मोबाइल चलाउने बानी घटाउने उपाय :
अब त मानिसको जीवनको अभिन्न अंग नै बनिसकेको छ, मोबाइल फोन । झन् स्मार्ट फोन हातमा चलाइरहनेहरु त निकै भेटिन्छन् । तर, थाहा नपाउँदानपाउँदै पनि यो मोबाइल फोन चलाउनु एउटा लत बनिसक्छ जसले समयको मात्र बर्बादी गर्दैन, कहिलेकांही त ठूलो समस्यामा पनि पार्छ ।
कतिपय अध्ययनहरुले मोबाइल चलाउँदा स्वास्थमा असर पर्ने निचोड पनि निकालेका छन् । मोबाइलकै कारण स्वास्थमा पनि असर पर्ने भए यसको प्रयोग कम किन नगर्ने त ? प्रयोग कम गर्न यस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ:
१. राती सुत्दा मोबाइल स्वीच अफ गर्नुहोस् । सक्नुहुन्छ भने मोबाइललाई आफू सुत्ने कोठामा नै नलैजानुहोस् । सकिँदैन भने पनि विस्ताराभन्दा अलिक पर राख्नुहोस् ।
२. साना नानीबाबुको एक्सेसमा मोबाइल नराख्नुहोस् । मोबाइलबाट निस्कने रेडियसनका कारण बालबालिकाको तालु पातलो हुने मात्र होइन, मस्तिष्कमा पनि समस्या पर्न सक्छ । यसले क्यान्सरसम्म हुन पनि सक्छ ।
३. मोबाइल सकेसम्म टाढा राख्नुहोस् । जसले गर्दा रेडियसनहरु मस्तिष्कमा जान पाउँदैन ।
४. मोबाइललाई सकेसम्म मुटु नजिक नराख्नुहोस जसले गर्दा मुटुमा प्रभाव पर्दछ । र पाइन्टको खल्तीमा नि नराख्नुहोस जसले प्रजनन् क्षमतामा कमी लेराउँछ ।
५. इयरफोन, हेडसेट जस्ता वस्तुहरुको प्रयोग नगर्नुहोस जसले रेडियसनको भन्दा तीन गुणा असर गर्छ ।
६. गाडी, हवाइजहाज, रेल जस्ता सवारी साधनमा आदीमा मोवाइलबाट निस्कने रेडियसनको परिमाण बढ्ने हुँदा मोबाइलको प्रयोग नगर्नुहोस् ।
७. मोबाइलको प्रयोगले आखाँ पोल्ने, आँखा सुक्खा हुने तथा थकाई महशुस हुने समस्या देखिन्छ । यस्तो कार्यले भिजन सिन्ड्रोम समस्या हुनसक्छ ।
८. स–साना बालबालिकाले मोबाइल फोन चलाउदाँ बढी मात्रामा उनीहरुमा क्यान्सरको समस्या भई अव्यवस्थित प्रयोगले बालबालिकाको मृत्युहुने अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् ।
९. धेरै बेर फोनको प्रयोग नगर्नुहोस् । दुई मिनेट कुरा गर्दा तपाईको मस्तिष्कमा प्राकृतिक विद्युतिय गतिविधी एक घण्टा सम्म प्रभावित गर्दछ ।
सुत्नुअघि मोबाइल चलाउने बानी छ ?
सुत्नु भनेकै निरन्तर काम गर्दै आएका शरिरका कोशिकालाई आराम गर्न दिनु पनि हो । शरिरका कोशिकालाई आराम गर्न दिइएन भने टोक्सिन अर्थात एक प्रकारको बिष उत्पादन हुन सुरु हुन्छ र त्यसको प्रतक्ष्य असर दिमाखमा देखापर्दछ।
साधारणतया ७ देखी ९ घण्टा सुत्नको लागि समय चाहिन्छ । त्यो भन्दा कम सुत्ने मानिसमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने, सम्झन सक्ने क्षमतामा ह्रास हुने, हेर्दा स्वस्थ्य नदेखिने (नेपाली उखानमा नुन खाएको कुखुरा जस्तो ) समस्याहरु देखापर्दछ।
राती १० बजे सुत्दै हुनुहुन्छ भने ९ बजे नै मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने छाडिदिनुपर्दछ । एक घण्टापछि सुत्नको लागि तयार हुदैगर्दा दिमाखले आरामको लागि तयार हुन थाल्दछ र दिमाखलाई डिजिटल डोमेनले प्रभावमा राख्न पाउदैन।
बिजनेश इन्साइडले तयार पारेको यो भिडियोमा मनोरोग विज्ञानका प्रोफेसर डा. डानियल सिगलले यसै भनेका छन् ।
मोवाइलमा लामो गफ गर्नुहुन्छ ?
प्रविधिको विकास र सहज पहुँचले संसारलाई नै नजिक बनाएको छ । विकसित धेरै प्रविधिमध्ये मोबाइल हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनेको छ । अडियो, भिडियो तथा समाचार प्राप्त गर्ने पहिलो माध्यम नै मोबाइल हुँदा यसको प्रयोग झन् बढेको छ । फेसबुक, स्काइप, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालले यसको महत्व बढाएको छ । नेपालजस्तो लोडसेडिङको मारमा परेको देशलाई त ल्यापटप, कम्प्युटरभन्दा पनि मोबाइल उपयुक्त भएको छ । तर, मोबाइल धेरै प्रयोग गर्दा पुर्‍याउने असरका बारेमा भने धेरैले त्यति ख्याल गरेको पाइँदैन ।
जीवनमा आएका चुनौतीहरुको सामना कसरी गर्ने ? महत्वपूर्ण जानकारी
इज्जत कमाउनहोस्, पैसाले त मात्र तपाईको भौतिक सुविधा पुरा गर्दछ
केटाकेटीहरु कुलतमा फसे, कसको गल्ती ? महत्वपूर्ण जानकारी
नियमित किताब पढ्ने व्यक्तिको आयु लामो हुन्छ – महत्वपूर्ण जानकारी
प्रेम सम्बन्धमा बस्नको लागि सहि उमेर कुन हो ? – प्रेरक प्रसंग
मित्रलाई सधै मनमा राख्नुहोस र सत्रुलाई सधै नजरमा राख्नुहोस – मनछुने भनाईहरु
शिक्षा लिनलाई कहिल्यै पनि पछी हट्नुहुदैन
© Copyright 2019 Sakaratmak Soch · Designed by Nepali Tech Blog